Vevo bụ tumadi a music video website-arụ ọrụ ọnụ na atọ nke "nnukwu anọ" isi music corporations. Ị pụrụ ịnụ ụtọ na-ekiri a ton nke music vidiyo na Vevo. Ma, mgbe ụfọdụ, ị pụrụ ịhụ a mmasị video ma na-achọ ibudata ya na-ekiri offline. Gị mmechuihu, ị nwere ike ghara ibudata ya mfe, ka naanị-egwu Vevo video site Apple TV. Ebe a bụ oké omume nke nwere ike inwe gburugburu nsogbu na-eme ka ọ dị mfe ibudata na kwa tọghata Vevo na vidio egwú Apple TV enyi na enyi usoro. Wondershare AllMyTube (AllMyTube for Mac) Nwere ike ịchọpụta ebre videos-akpaghị aka. Ọ naanị kwesịrị otu Pịa ibudata na tọghata videos. Ike na-eche ka a na-agbalị? Ka nwere a anya otú iji usoro ihe omume na-enweta music videos na mkpịsị aka gị.
Na-na-akwadebe site itinye usoro ihe omume na kọmputa gị na imeghe ya. Anyị ga na-windows version maka otu ihe atụ. Mgbe ahụ gaa Vevo website ịchọta ọkacha mmasị gị music video. Mepee video-egwu. Mgbe ị na-anụ ụtọ mara mma olu, adịghị agbaghara sere n'elu Download bọtịnụ na n'elu-nri nke video ihuenyo. Pịa bọtịnụ na-amalite nbudata.
Tịm fiọk: Ị ga-n'aka na ị malite otu n'ime atọ nchọgharị (ntụgharị, Firefox, Chrome) ka ịnweta Vevo website, ma ọ bụrụ na ọ bụghị, nke Download button nwere ike adịghị egosi.
Na i nwekwara ike ibudata videos nanị site na-edegharị ya url na pịa Paste Url bọtịnụ na niile na-eme.
2 tọghata Vevo ka Apple TV enyi na enyi format
Mgbe nbudata, biko chọta gị Vevo vidiyo na ebudatara udi. Ebe i nwere ike ịhụ ọmụma bụ isi banyere videos dị ka size, usoro na mkpebi. Pịa tọghata bọtịnụ na nri ma họrọ Apple TV dị ka mmepụta usoro.
Cheta na: Nke a na usoro-enye gị ohere ibudata na tọghata n'otu oge. Biko gaa interface nke usoro ihe omume, họrọ nbudata Atiya na ị ga-ahụ a taabụ Download mgbe ahụ tọghata ke ziri ezi. Tụgharịa ya na na ịtọ Ngwaọrụ> Apple> Apple TV dị ka mmepụta usoro. Mgbe ahụ oge ọzọ, mgbe ị na ibudata ọzọ Vevo video, ọ ga-converted Apple TV format-akpaghị aka.
Mgbe ngwa ngwa converting, nri pịa video ke converted Atiya ka Meghee converted nchekwa, mgbe ahụ, i nwere ike iji aka nyefee video na-ekiri na gị nnukwu ihuenyo TV site Apple TV.
Ugbu a, ọrụ gị na-eme na ị kwesịrị nwere iko kọfị na-anọdụ tupu TV na-enweta video. Ọ bụrụ na ị chọrọ igwu na ndị ọzọ na obere ngwaọrụ, ị nwekwara ike na-eso nzọụkwụ ma họrọ ọzọ obere ngwaọrụ dị ka mmepụta usoro.
Olee otú Download na tọghata VEVO Videos ka MP3
> Resource> égwu> Olee otú Download Vevo ka Apple TV